अध्याँरो गल्लीमा बत्ती बलेको खण्डमा धेरै महिलाको सुरक्षा हुन्छ ।
जेठ १५, २०७८ सन्ध्या पौडेल
‘जाडोको महिना बिहान ५ बजे न्यूज पढ्न घरबाट निस्किएँ् । ओम आश्रम अगाडीको गल्लीमा आइपुग्दा कसैले अचानक पाखुरा समात्यो, म आत्तिएँ । तत्काल मेरो बोली नै निस्केन, आत्तिए । संयोगबस नजिकै सहकर्मीको कोठा थियो । अनि प्रतिकार गरी हल्ला गर्दै फुत्किएर सहकर्मीको कोठासम्म पुगें । त्यसपछि मात्रै सुरक्षित महशुस गरें ।’ वीरगञ्ज मुर्ली बगैचा बस्ने माधुरी महतोले विगतको एउटा घटना सम्झँदै भनिन् । सामान्य दूव्र्यवहार त धेरै हुन्थे । हातै समात्ने हिम्मत गरेको चाही यो पहिलो दूव्र्यवहार हो उनले थपिन् ।
उनी बिबिसी नेपाली सेवा र नारायणी एफएम वीरगन्जमा काम गर्छिन् । रेडियोमा समाचार पढ्न बिहान सबेरै निस्कनु पर्छ । कहिले काम सकेर फर्कदा राती हुन्छ । अध्याँरा गल्लीमा उनले पटक–पटक दुव्र्यबहार भोग्नु परेको थियो । त्यो घटना भएको चार वर्षपछि पनि माधुरीलाई लाग्छ, बत्ती भैदिएको भए त्यस्तो घटना बेहोर्नु पर्दैनथ्यो होला । त्यो घटना सम्झँदा अहिले पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ उनले भनिन् । त्यसपछि सवेरै काममा जान उनलाई डर लाग्न थालेको सुनाइन् ।
त्यतिखेर उनले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि एक सातासम्म प्रहरी टोलीले यस बाटोमा गस्ती गरेको थियो । ‘पछि थाहा पाए । रेडियोका अरु महिला सहकर्मीहरुले पनि यस्तो दुव्र्यबहारको भोग्नु परेको रहेछ ।’ उनले भनिन् । ‘रेडियोको काम सकेर घर फर्किदा बेलुका ७÷८ बज्छ । सेनाको ब्यारेक भएर आउने बाटो अँध्यारो छ । होटेल भएकाले राती भिड्भाड हुन्छ । त्यो बाटो हिँड्दा दुव्र्यवहार गर्ने हुन कि भन्ने डर थियो । तर पछिल्लो समयमा सडक बत्ती जडान भएपछि फेरि सडकमा त्यस्ता दूव्र्यवहार भोग्नु परेको छैन पत्रकार माधुरीले समग्रमा बताइन् । सडक बत्तीको व्यवस्था उज्यालो वीरगंज अन्र्तगत जडान भएका हुन् ।
‘वीरगञ्ज हामीले सोचे जति असुरक्षित छैन । बत्ती नहुँदा असुरक्षित भए पनि सडक र गल्लीहरुमा बत्ती जडान भएपछि भने साँझपख बाहिर आउँजाउ गर्न निकै सहज भएको वीरगन्ज १६ कि कुन्ती चौधरीले पनि बताइन् । ‘बिहान सबेरै कलेज जाँदा निकै समस्या हुन्थ्यो, जाडो महिनामा त हुस्सु लाग्ने भएकोले अध्यारो हुन्छ । बाइकमा आउने केटाहरुले हानौंला झैं गरी बाइक छेउबाटै कुदाउँथे । शरीरमा छुन्थे । यो समस्या धेरैले भोग्नु परेको थियो ।’ तर अब यस्तो हुन छोडेको छ । अध्यारोको फाइदा उठाएर गरिने उछृङ्गखल गतिविधिलाई थोरै भए पनि उज्यालो वीरगंज अभियानले राहत मिलेको वीरगन्ज पब्लिक कलेजकी विद्यार्थी सञ्जना कार्कीले बताइन् ।
दिव्य युवा क्लबले सन् २०१७ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार वीरगन्जमा सार्वजनिक स्थानमा महिला माथि दुव्र्यबहारको प्रमुख कारण बाटो, गल्लीमा बत्ती नहुनाले हुने गरेको भेटिएको थियो । अध्याँरा गल्लीमा आवारा केटाहरु लुकेर बस्ने अनि गल्लीमा हिड्ने युवती, किशोरी तथा महिलालाई जिस्क्याउने गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । घण्टाघर, बसपार्क, पावर हाउस चोकदेखि यातायात कार्यालयसम्म, वीरगञ्ज भन्सार वरिपरिको क्षेत्र, अस्पताल, विद्यालयहरु, यातायातका साधनहरुमा लेखाजोखा गरिएको थियो । सो अध्ययनका लागि कुराकानी गरिएका ३० जना मध्ये १५ जनाले आफूहरुले दुव्र्यबहार भोग्नु परेको बताएका थिए । उनीहरुले सडक छेउछाउमा बत्ती नहुँदा समस्या भोगेको गुनासो गरेको अनुसन्धान पछिको रिपोर्टले देखाएको थियो ।
सडकबत्ती नहुँदा काम गर्न घर बाहिर निस्कन पर्ने महिला, विद्यालय तथा कलेज जाने छात्राले विभिन्न प्रकारका हिंसा तथा दुव्र्यबहार भोग्नु परेको महिला अधिकारकर्मी कोपिला चौलागाईले पनि बताइन् । अधिकारकर्मी चौलागाई सन् २०१४ देखि ‘सुरक्षित शहर अभियान’ अन्तरगत सार्वजनिक स्थानमा महिला सुरक्षाको अवस्थाको लेखाजोखा गर्ने काम गर्दै छन् । बिहान कलेज जाँदा बत्ती नभएका गल्लीमा हिँड्दा १४ देखि १९ वर्षका किशोरीलाई उछृंखल केटाहरुले पछ्याउने, छुने, छुन खोज्ने, सांकेतिक भाषामा जिस्काउने गरेको पाएका छौं । साँझ बिहान आवत जावत गर्नुपर्ने महिलाले पनि दुव्र्यवहार भोग्नु परेको थियो’ उनले भनिन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गौरबको आयोजनाको रुपमा उज्यालो वीरगञ्ज अभियान चलाएको छ । महानगरपालिकाले यसलाई नेपालका लागि नमुना कार्यक्रम भएको दावी गर्ने गरेको छ । यस अन्र्तगत महानगरपालिकाका ३२ वटै वडाका मुख्य तथा भित्री सडकमा बत्ती जडान गरिने जनाएको छ ।
वीरगञ्जका धेरै जसो सडक अध्याँरो भएको, नियमित रुपमा बत्ति फेरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको कुरालाई ध्यान दिएर उज्यालो वीरगञ्ज कार्यक्रम ल्याईएको महानगरपालिकाको भनाइ छ । यसको आर्थिक भार ५० प्रतिशत नेपाल सरकार र ५० प्रतिशत महानगरपालिकाको लागतमा सञ्चालन भइरहेको छ । यसको कुल लागत २४ करोड रहेको महानगरले जनाएको छ ।
आवश्यकता हेरी ४०, ६०, १०० वाटका बत्ती जडान गरिएको छ । बत्ती तोकिएको समयमा बल्ने र निभ्ने गर्छन् । यसले गर्दा आवश्यक नभएको बेला बत्ती नबल्ने हुँदा बिजुली खपत घटी महानगरपालिकाको पैसा बचत हुने दावी गरिएको छ । यो काम २०७९ असार मसान्तसम्ममा सकिनेछ ।
महानगरपालिकाका सहरी पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख राकेश साहका अनुसार एउटा विषेशता के हो भने सन् २०२६ सम्म बत्ती नबल्दा ठेकेदारले मर्मत गर्नुपर्छ । उसले त्यसो गरोस भन्नका लागि ठेकेदारबाट धरौटी लिईएको छ । ‘कोभिड महामारीले गर्दा योजना कार्यान्वयनमा केहि समस्या भईरहेको छ । त्यसैले यो काम तोकिएको समयमा भइनसक्ने हुँनाले २०७८ असार सम्मको १ वर्ष सयम थप गरिएको छ । ’महाशाखा प्रमुख साहले भने ।
किन ल्याइयो उज्यालो वीरगञ्ज कार्यक्रम ?
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका पुराना भेपर लाईट पूरे नबलेका भने होइन । भेपर लाईट छिटो विग्रनुको साथै त्यसले मानव शरीरमा समेत असर पार्ने प्राविधिकहरु नै बताउँछन् । महानगरपालिकाको १६ वटा वडा ग्रामिण भेगमा पर्छन् । शहरी क्षेत्रका पोलमा बत्ती जडान भए पनि ग्रामिण क्षेत्रमा अझैसम्म केही पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन । अर्को कुरा, महानगरपालिकामा कहिलेकाँही चौबीसै घण्टा समेत सडक बत्ति बालिन्छ । यसले गर्दा बिजुली खेर गइरहेको छ, । महानगरपालिकामा विद्युत्मा अनावश्यक आर्थिक भार परेको पनि छ । ‘महानगरपालिकाले हरेक पोलमा गएर बत्ती निभाउन समस्या हुन्छ, सर्वसाधारणले बत्ती निभाई दिँदैनन् । जसको विकल्प उज्यालो वीरगंज अभियान लयाईएको महानगरले जनाएको छ । उज्यालो वीरगञ्ज अभियान अन्र्तगत जडान भएका बत्ती आवश्यकता अनुसार आफैं बल्छन्, आफैं निभ्छन् ।’ यस अभियान अन्र्तगत ४ हजारको हाराहारीमा बत्ती जडान भएको र ३ हजार पुराना बत्ती महानगरपालिकामा फिर्ता गरिएको वीरगंज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले बताए ।
लाईट जडानका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई छुट्टै लाईन दिन भनिएको भए पनि हाल सम्म उक्त तार जडान भएको छैन । ‘४ सय किलो मिटर तार अपुग छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जडान गरिदिनु पर्ने उक्त पाँचौ तार जडान नभएको कारण ले काम गर्न ढिलाई भएको नगर प्रमुख सरावगीले बताए । उनले भने श्रावनबाट तार जडान गरी २ महिनामा सक्ने भन्ने आशवासन सम्बन्धित व्यक्तिले दिएका छन् । अर्को यो लकडाउन र कोरोना संक्रमणको कारणले पनि काममा ढिलासुस्ति हुन गएको छ । हामीले असार मसान्तसम्म सक्ने भनेका थियौं । तर २ पटकको कोरोना, सामाग्रीको अभावले गर्दा २०७९ असार मसान्त सम्मको समय थप गरिएको हो । जनता एकदमै खुशी छन् । बत्ती जडान नभएको ठाउँबाट हाम्रोमा पहिला लगाउनु प¥यो भन्ने माग आइरहेको छ ।
पुराना लाईटहरु भएको ठाउँमा दोहोरा खर्च
नगर प्रमुख सरावगी भन्छन्, ‘यो दोहोरो खर्च नभएर बारम्बार खर्च नहोस् भनेर एकै पटक खर्च गर्न लागिएको हो । अर्कोतिर यसले विद्युतको खर्चलाई पनि कम गर्छ । अहिलेसम्म हामीले विद्युत प्राधिकरणले दिएको विल अनुसार नै बिल तिर्दै आएका थियौं । अब कति युनिट विद्युत खपत भयो ? भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ । पैसासँगसँगै विद्युतको पनि बचत हुन्छ ।’ कोरोना महामारीको समयमा पनि वीरगञ्जको १,२,८,१५,१६,१७ नं वार्ड
र मुख्य सडक लगायतमा उज्यालो वीरगञ्ज कार्यक्रमको बत्ति बलिसकिएको छ । उज्यालो वीरगञ्ज कार्यक्रम अन्र्तगतका लाईटहरु जडान भएपछि साँझ विहान काम विशेषले घर बाहिर हिँडडुल गर्नु पर्ने महिलाहरु पनि खुशी रहेको पाएका छौं । अभियानका बत्तीहरुले वीरगञ्ज महानगरकाका हरेक गल्लीलाई उज्यालो पार्ने लक्ष्य रहेको नगरप्रमुख सरावगीले बताए ।
उज्यालो वीरगञ्ज अभियानले महिला सुरक्षाका विषयलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने महिला अधिकारकर्मी चौलागाईको भनाइ छ । अध्याँरो गल्लीमा बत्ती बलेको खण्डमा धेरै महिलाको सुरक्षा हुन्छ ।,’ ‘हाल सडक गल्लीमा जडान भएका बत्तीहरुले रातको समयमा काम बशेषले बाहिर जाँदा वा घर फकर्दा निर्धक्कका साथ बाटो हिड्न सकिने भएको छ उनले भनिन् । अभियानका बत्तिको कारण अहिले एकदमै सहज भएको छ । टावर टाइटले दिने परसम्मको उज्यालो र सडक छेउमा रहेका विजुली पोलमा राखिएका बत्तीहरुले सकड उज्याला भएका छन् । लाग्छ रातको समयमा चिल्ला सडक र बत्तीले बाटो हिड्नेहरुको स्वागत गरिरहेको छ । यो अभियान बाटो हिड्नेहरुका लागि सकारात्मक भएको वीरगंज १५ की शवनम भट्टराईले बताइन् । कार्यालयबाट फर्किदा अबेर हुन्छ । पहिला अध्यारो थियो । तर बत्ती राखेपछि भने सहज भएको छ उनले भनिन् ।
उज्यालो वीरगन्ज अभियानको जिम्मेवारी किरण गौतम टपसन इनर्जी र सूर्योदय उर्जा ( राम भण्डारी ) नामक दुई कम्पनीले लिएका छन् । १३ हजार ७०० लाईट जडान् गर्ने भनिएको छ । यसमा ४ हजारभन्दा माथि लाइटहरु लागेका छन् । कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गए पछि हामीले हाम्रा कामदारहरुलाई आफ्नो स्थानमा पठाएको छौं । सम्झौता अनुसार ०७७–०७८ असारसम्म काम सक्नु पर्ने थियो । तर विभिन्न कारणहरुले गर्दा तोकिको समयमा काम सकिएन । एउटा कारण कोरोना माहामारी र पाँचौं तारको जडान नभएकोले गर्दा पनि काममा ढिलाई भएको उनको कामको जिम्मेवारी लिएका कम्पनीका राम भण्डारीले बताए । महानगरले तयार गरेको डिपीआर अनुसारनै बत्ती जडान भइरहेको उनको भनाइ छ । वीरगंज महानगरपालिकाले गर्दै गरेको यो महत्वकांक्षी कार्यक्रम पालिकाहरु अन्तर्गतको पहिलो कार्यक्रम भएको पनि भण्डारीले बताए । जडान गरेका बत्तीहरुमा सेन्सर जडान गरिएकोले बत्ती आफै निभ्ने र बल्ने काम भइरहेको छ । पाँचौ तार जडान भएदेखि हामीलाई सहज हुने र दिगो पनि हुने उनको तर्क छ ।
#महिलाका लागि सुरक्षित माध्यम उज्यालो वीरगन्ज अभियान
असार ३१, २०७८ सन्ध्या पौडेल
असार २७, २०७८ सन्ध्या पौडेल